လူတစ္ေယာက္အတြက္ မရွိမျဖစ္တဲ့ သူငယ္ခ်င္း(၈)မ်ဳိး ဆုိတာ .... - Thadin
HomeKNOWLEDGEလူတစ္ေယာက္အတြက္ မရွိမျဖစ္တဲ့ သူငယ္ခ်င္း(၈)မ်ဳိး ဆုိတာ ….
လူတစ္ေယာက္အတြက္ မရွိမျဖစ္တဲ့ သူငယ္ခ်င္း(၈)မ်ဳိး ဆုိတာ ….
March 17, 2019 Kay Kay KNOWLEDGE, LIFESTYLE Comments Off on လူတစ္ေယာက္အတြက္ မရွိမျဖစ္တဲ့ သူငယ္ခ်င္း(၈)မ်ဳိး ဆုိတာ ….
သူငယ္ခ်င္း မိတ္ေဆြေတြနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ စကားတစ္ခြန္းက ဒီလိုဆိုထားပါတယ္။ “သူငယ္ခ်င္းမိတ္ေဆြမ်ားရင္ ေလွ်ာက္တဲ့လမ္းက ေျဖာင့္သြားတယ္”တဲ့။
လ်င္သူစားစတမ္း၊ သာသူျမတ္ဆိုတဲ့ ေခတ္ကာလေၾကာင့္ လူအခ်င္းခ်င္းၾကားမွာ ဘယ္သူက အစစ္အမွန္၊ ဘယ္သူက အတုအေယာင္ဆိုတာကို ခဲြျခားဖို႔ခက္ခဲသြားတယ္။ “သူငယ္ခ်င္း”ဆိုတဲ့ အေခၚကိုလည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ ထိတ္လန္႔လာခဲ့ၾကတယ္။
ဒီလိုဆိုရင္ ဘယ္လိုအရာမ်ဳိးကို သူငယ္ခ်င္းအစစ္အမွန္လို႔ ေခၚသလဲ? လူတစ္သက္မွာ အဲဒီလို သူငယ္ခ်င္းမ်ဳိး ဘယ္ႏွေယာက္လိုသလဲ?
အေမရိကန္စာေရးဆရာ Todd Parrက “အရင္းႏွီးဆံုး သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္ဆီကေန သင္လိုခ်င္တဲ့အရာေတြ ရလိမ့္မယ္လို႔ မေမွ်ာ္လင့္ပါနဲ႔”လို႔ ဆိုထားတယ္။ အေမရိကန္စာေရးဆရာ Tom Rathက လူတစ္ေယာက္မွာ မရွိမျဖစ္တဲ့ သူငယ္ခ်င္း(၈)မ်ဳိး လိုအပ္တယ္ဆိုၿပီး အခုလို႔ေရးသားခဲ့ပါတယ္။
သူငယ်ချင်း မိတ်ဆွေတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ စကားတစ်ခွန်းက ဒီလိုဆိုထားပါတယ်။ “သူငယ်ချင်းမိတ်ဆွေများရင် လျှောက်တဲ့လမ်းက ဖြောင့်သွားတယ်”တဲ့။
သူငယ်ချင်း မိတ်ဆွေတွေ အသစ်တိုးတာ မင်္ဂလာတစ်ပါးပါ။ လူတိုင်း သူငယ်ချင်းအသစ်တွေနဲ့ ခင်မင်ရင်းနှီးနိုင်ဖို့ မျှော်လင့်ကြတယ်။ ဒါပေမဲ့ (American Sociological Review，ASR)က သူတို့လေ့လာဆန်းစစ်ခဲ့တဲ့ ဆန်းစစ်ချက်အရ အခုခေတ်လူတွေမှာ သူငယ်ချင်းတွေ နည်းသထက်နည်းခဲ့ကြတာကို တွေ့ရတယ်။ လေ့လာဆန်းစစ်ခံရသူ ၄ပုံ၁ပုံက သူတို့မှာ သူငယ်ချင်းနည်းရတဲ့အကြောင်းက ဘယ်သူ့ကိုမှ ယုံကြည်လို့မရကြောင်း ဆိုထားကြတယ်။
လျင်သူစားစတမ်း၊ သာသူမြတ်ဆိုတဲ့ ခေတ်ကာလကြောင့် လူအချင်းချင်းကြားမှာ ဘယ်သူက အစစ်အမှန်၊ ဘယ်သူက အတုအယောင်ဆိုတာကို ခွဲခြားဖို့ခက်ခဲသွားတယ်။ “သူငယ်ချင်း”ဆိုတဲ့ အခေါ်ကိုလည်း ကျွန်တော်တို့ ထိတ်လန့်လာခဲ့ကြတယ်။
ဒီလိုဆိုရင် ဘယ်လိုအရာမျိုးကို သူငယ်ချင်းအစစ်အမှန်လို့ ခေါ်သလဲ? လူတစ်သက်မှာ အဲဒီလို သူငယ်ချင်းမျိုး ဘယ်နှယောက်လိုသလဲ?
အမေရိကန်စာရေးဆရာ Todd Parrက “အရင်းနှီးဆုံး သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ဆီကနေ သင်လိုချင်တဲ့အရာတွေ ရလိမ့်မယ်လို့ မမျှော်လင့်ပါနဲ့”လို့ ဆိုထားတယ်။ အမေရိကန်စာရေးဆရာ Tom Rathက လူတစ်ယောက်မှာ မရှိမဖြစ်တဲ့ သူငယ်ချင်း(၈)မျိုး လိုအပ်တယ်ဆိုပြီး အခုလို့ရေးသားခဲ့ပါတယ်။
သူတို့က သင့်ကောင်းကွက်တွေ သင်ကိုယ်တိုင် သိမြင်နိုင်ဖို့ သင့်ကိုအမြဲကူညီအားပေးတယ်။ ဒီလို သူငယ်ချင်းမျိုးကို ဆရာအမျိုးအစားလို့ခေါ်တယ်။ သူတို့က သင့်ရဲ့ဆရာဖြစ်ချင်မှဖြစ်မယ်။ ဒါပေမဲ့ သူတို့မှာ အခြားဗဟုသုတ၊ အတွေ့အကြုံတွေနဲ့ ပြည့်စုံတယ်။ သင့်ရဲ့အလုပ်အကိုင်၊ မိသားစု၊ လူလူချင်း ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးတွေမှာ သူတို့က သင့်ကို အကြံဉာဏ်တွေပေးနိုင်တယ်။ လူ့ဘဝမှာ ဒီလိုသူငယ်ချင်းမျိုးက သင့်စိတ်ကို ထောက်ကူပေးတဲ့သူဖြစ်တယ်။ သူတို့ဟာ သင့်အနားမှာ အမြဲရှိနေပြီး သင်အတုယူထိုက်သူလည်းဖြစ်တယ်။
သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ အမြဲမဆက်သွယ်တိုင်း၊ အမြဲမတွေ့ဆုံမိတိုင်း မေ့သွားပြီလို့ မဆိုနိုင်ပါဘူး။ သူငယ်ချင်းဆိုတာ ဟောင်းနွမ်းသွားလို့ရပေမယ့် ခင်မင်ရင်းနှီးမှုက ယုတ်လျော့သွားလို့ မရဘူး။ သင့်ဘဝတစ်သက်မှာ စိတ်တူကိုယ်တူ သူငယ်ချင်းကောင်း ဘယ်နှယောက်ရှိနိုင်မလဲ? တကယ်လို့ အထက်က သူငယ်ချင်းမျိုးနဲ့ သင်ကြုံဆုံလာတဲ့အခါ သူတို့ကို တန်ဖိုးထားမြတ်နိုးလိုက်ပါ။ ရေးသားသူ – နိုင်းနိုင်းစနေ
အားမေပးတဲ႔ ပရိတ္သတ္ကို ေက်းဇူးမတင္ႏိုင္ပါဘူး ဆိုတဲ႔ သားစစ္
အခေၾကးေငြျဖင့္ မဲေပးေရြးခ်ယ္ေစမႈေၾကာင့္ အႏုပညာရွင္ေတြ ႏုတ္ထြက္ကုန္ၾကတဲ့ Stars Award
Total views : 2424862